Home Wararka Cumar Filish oo lagu baxinayo heshiiska awood qaybsiga ee Rooble & Farmaajo
Cumar Filish oo lagu baxinayo heshiiska awood qaybsiga ee Rooble & Farmaajo
Sida aad lawada socotaan waxaa laba asbuuc ka hor heshiis wada-gaaray Farmaajo iyo Rooble kaas oo aasaas looga dhigay awood qaybsi dhex mara labada nin. Rooble oo taabagalinaya heshiiskaas ayaa durbadiiba waxa uu bilaabay in uu qaybtii isaga loo siiyay awood qaybsiga uu u magacaabo shaqsiyaad isaga ku dhaw kana tarjumaha danahiisa..
Dhanka kale Farmaajo ayaa isagana waxa uu dhankiisa ka bilaabay in uu magacaabo kooxo ama shaqsiyaad ka tarjumaya danahiisa gaar ah. Hadaba waxaa heshiiska ka mid ahaa in Cumar Filish shaqo ceyrin lagu sameeyo.
Madaxweyne Lafta Gereen oo isagu hogaanka u hayay heshiisiinta labada nin ayaa ka codsaday labada dhinac in ceyrinta Cumar Filish dib loo dhigo. Rooble oo arintaan fulinaya ayaana magacaabay gudi baaritaan ku soo sameeyo eedeynta loo jeediyay Cumar Filish.
Sida MOL loo xaqiijiyay Farmaajo ayay ka soo dhamaatay go’aanka ah in Cumar Filish shaqo ceyrin lagu sameeyo laakiin waxa uu waxa uusan wali go’aan ka gaarin cida uu ku badali lahaa Cumar Filish. Xiligaan kala guurka ah ayuu Farmaajo doonayaa in uu ku badasho Cumar Filish qof kala shaqeeya doorashadiisa.
Dhanka kala Shiikh Shariif oo habeenadii u danbeeysay isaga daba noq-noqnoqonayay guriga Farmaajo ayaa dhankiisa codsaday in qof uu isaga wato lagu badalo Cumar Filish.